गैससलाई नियमन गर्न जरूरी
बुटवल । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका गैर सरकारी संस्थाको नियमन जरूरी रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । थोरै काम ज्यादा प्रचार गर्ने गैससहरूलाई अनुगमन गरी नियमन गर्न आवश्यक देखिएको उनीहरूको जोड थियो । गैरसरकारी संस्था महासंघन नेपाल प्रदेश नम्बर पाँचले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको गैससहरूको स्थान, भूमिका र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरू गैससहरू धेरै भएको भन्दै मर्जको आवश्यकता समेत औलाए । कार्यक्रममा बोल्दै गैससका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले...
जब बेहुलीको बसाई बुटवल–तब बेहुला बेहाल
प्रेंम सुनार बुटवल । बिदेश गयो कि श्रीमतिका नाममा बुटवलतिर घडेरी किन्दै बसाई सराई गर्ने पुरुषहरु मध्येका कतिपय पुरुषहरु ‘बेहाल भयो जिन्दगी यो त्यही मोरीका भरमा परी…. ’ भन्ने बोलको गित गुनगुनाउने भएका छन । माथी उल्लेखित शिर्षक सबैमा लागु त नहोला तर त्यहाँ श्रीमतिका नाममा घडेरी किनेर बसाई-सराई गर्ने मध्ये केहि प्रतिशत पुरुषको हालत त्यस्तै भएको पाईएको छ । बिदेशबाट आई विवाह गरे लगत्तै सुरुमा बेहुलीलाई बुटवलमा डेरा गरी राखेका...
जुनियर जेसिजद्धारा कुष्ठप्रभावितलाई सहयोग
बुटवल । बुटवल जुनियर जेसिजले कुष्ठ प्रभावितलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । आइतबार जुनियर जेसिजको सम्पूर्ण टोली कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्ति कल्याण समिति पारी बुटवल पुगेर १५ हजार रूपैयाँ बराबरका चामल, दाल, अण्डा, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न प्रदान गरेका हुन् । समितिमा ३ जना वृद्धवृद्धाहरू बस्दै आएका छन् । खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्दै बुटवल जुनियर जेसिजका जन्मदाता मन्जु भुसालले युवाहरू कुलतमा नलागी सामाजिक सेवामा जुटनुपर्ने बताइन् । उनले वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्मानका साथ सहयोग गरेकोमा...
शिद्धबाबा देखि तम्घास सम्मको जनैपुर्णिमाको चहल पहल
प्रेम सुनार बुटवल । रुपन्देही सहित छिमेकी जिल्लावासीको समेत धार्मिक आश्थाको केन्द्र शिद्धबाबामा आज जनै फेर्ने, डोरो बान्नेहरुको बिहानै देखि भिड चलिरहेको छ । बिहानै देखि बुटवलका चोकचोकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भेटघाट शुभकामना आदन प्रदानमा ब्यस्त भएको उनका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मी बताउँदै थिए । अन्य मन्त्री र सांसद कर्मचारी पनि शुभकामना आदान प्रदानमा ब्यस्त थिए । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले सारा नेपालीहरुको महिमा र आश्थालाई सम्मान गर्ने बताउँदै जनैपुर्णी...
गाँउपालिकामा सन्चार सेवा सहज
तारा पौडेल कन्चन । कन्चन गाँउपालिका वडा नं ५ पिपरीचापाका स्थानिय बासीले लामो समय देखि सन्चार क्षेत्रमा बिभिन्न समस्या भोग्दै आएका थिए । नमस्ते र एनसेल सिम प्रयोग गरेतापनि टावरले राम्ररी काम नगर्दा स्थानिय बासीले दिनप्रतिदिन हैरानी ब्योहोर्नु परेको थियो। तर अब भने त्यो समस्या समाधान भएको छ । शुक्रबार बेलुकी नेपाल टेलिकम क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवाले ntc को टावर राखिदिएपछि सन्चार सेवा सहज भएको हो । प्रतिनिधी सभाका सदस्य माननिय भरतकुमार शाह...
लिलाधर वली दाङ । राज्यको बेवास्ताका कारण घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको सहिद पार्क तथा सास्कृतिक संग्रालय ओझेलमा परेको छ । २०५६÷०५७ सालतिर भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुदाँ उदघाटन भएपनि अहिलेसम्म पार्क निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्क उदघाटन भएको करिव दुई दशक बितिसक्दा समेत पार्क निर्माणले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन । अहिलेसम्म पार्कको नाममा रहेको करिव ढाईदेखि ३ तीन विगाह जमिनमा पर्खाल लगाउने र नेत्रलाल अभागीको शालिक निर्माण...
पर्यटन विकासमा मिडीयाको भूमिका महत्वपुर्ण
नरेश के.सी. भैरहवा । पर्यटन विकासमा मिडीयाको भूमिका महत्पुर्ण हुने पर्यटन र मिडीया क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधीले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी खबरद्वारा आयोजित पर्यटन र मिडीया विषयक् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पर्यटन पत्रकार प्रदीप आचर्यले प्रदेश नं ५ पर्यटनको सम्भावना र मिडीयाको भूमिका विषयक १० पेज लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र,पहुंच,प्रडक्ट र एकोमोडेसन भएर मात्र पनि पुग्दैन त्यहांको प्रचार चाहिन्छ । प्रचारको काम गर्ने मिडियाले हो भन्दै मिडीया र पर्यटन व्यवसायी...
बुटवल । झरना स्पोर्ट्स क्लब तिलोत्तमा ६ कुञ्जलापुरको ५८ औ साधारण सभा तथा २९ औ अधिबेशन सम्पन्न भएको छ । कुञ्जलापुर स्थित मगर भवनमा सम्पन्न सो साधारण सभा तथा अधिबेशनले पुनः लोक पुनकै अध्यक्षतामा निर्बिरोध नया समिति चयन गरेको छ । क्लबका अध्यक्ष लोक पुनको अध्यक्षता तथा तिलोत्तमा वार्ड न ६ का अध्यक्ष सुखदेव न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न साधारण सभामा वार्ड न ६ मा स्थायी बसोबास गर्ने ७ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई...
तीजलाई सांस्कृतिक रूपमा मनाऔंः मन्त्री पौडेल
बुटवल । प्रदेश नम्बर पाँचका कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री आरती पौडेलले तीजलाई सांस्कृतिक रूपमा मनाउनुपर्ने बताएकी छन् । पछिल्ला वर्षमा तीज पर्व भडकिलो बन्न थालको भन्दै तीजलाई सांस्कृतिक मौलिक पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने बताइन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियन लुम्बिनी क्षेत्रीय समिति र नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त) लुम्बिनी क्षेत्रीय समितिले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले महिलाहरूको चाड तीजको आफ्नै किसिमको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं...
बुटवल । सगरमाथा टोल विकास संस्था बुटवल–८ ले शनिबार वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्मान गरेको छ । संस्थाले ८० वर्ष उमेर पुगेका १० जना जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै तीज मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो अवसरमा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बुटवलमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र बनाउने योजनाका साथ आफूहरू जुटेको बताइन् । उनले त्यसको लागि जग्गा व्यवस्थापनका काम अगाडि बढेको आचार्यले जानकारी गराइन् । उनले जेष्ठ नागरिकलाई अपहेलना होइन ।...